Passport ရုံးမှဆောင်ရန်ရှောင်ရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Passport ရုံးမှဆောင်ရန်ရှောင်ရန်
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Nov 21, 2013 in Creative Writing | 33 comments
ကိုယ်တွေ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်
မနေ့က passport သက်တမ်းသွားတိုးပါတယ်။ မသွားခင်ရက်ကတဲက စိတ်ဖိစီးမှု့အတော်များပါတယ်။ အဲဒီရုံးကတခါသွားစည်းကမ်းတခါပြောင်းမို့ ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ် လာမယ် မသိတော့ စိတ်မအေးဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ မတိုးမဖြစ်ဆိုတော့ ဘုရားတရားတသွားရပါတယ်။ အတော်လေးဖြေလျှော့လာတဲ့စည်းကမ်းတွေကြောင့်တရက်နဲ့ပြီးခဲ့ပါတယ်။ ခါတိုင်းလို ရုံးပေါင်းစုံပြေး ဖောင်တင် စလစ်ထုပ်နဲ့ရက်တွေအလီလီသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။ လက်မောင်းပြုတ်မတတ်ဖောင်တွေလဲဖြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောက် ပိုက်ဆံ အိပ်တွေလဲရုံးထဲယူလို့ရပါပြီ။ အရင်ကဆိုအပေါက်မှာအိပ်တွေအပ်ပစ်ခဲ့ရတာစိတ်ညစ်စရာပါ။ အခုတော့ယူခွင့်ရှိပါပြီ။ အခုလုပ်မဲ့သူတွေအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့သိသင့်သိထိုက် တာလေးတွေပြောပြချင်လို့ပါ။ မခက်ပေမဲ့ပိုမြန်အောင်လို့ပါ။ တခါရွာသားတယောက်တင်ဖူးတယ်ထင်ပါတယ်။ အခုကတော့ ယနေ့အခြေအနေလေးပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။
၁. အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ ( ၃ ) စုံ နှင့် မူရင်း
၂. မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( ၃ ) စုံ နှင့် မူရင်း
၁. မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( ၂ ) စုံ နှင့် မူရင်း
၂. passport စာအုပ်အဟောင်းမိတ္တူ ( ၂ ) စုံ နှင့် မူရင်း ဒါပဲလိုပါတယ်။
ကျန်တာကတော့ စာရွက်ထည့်ဖို့အိပ်၊ ဘောပင်၊ ကော်ဗူးအခြောက်၊ Correction Pen ပဲလိုပါတယ်။ နောက် ယပ်တောင်နဲ့ ရှုဆေးဗူးလေးဆောင်ထားတာတော့ပိုကောင်းပါ တယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ အလုံပိတ်လုနီးပါအခန်းထဲမှာ လူတစ်ရာကျော်နှစ်ရာလောက်ကထွက်တဲ့အနံ့တွေရယ်၊ နံရံအပြည့်ထွေးထားတဲ့ ကွမ်းသွေးအနံ့တွေရယ်၊ လျှံကျနေတဲ့ အမှိုက်ပုံးကအနံ့တွေရယ်နဲ့က သေလုလုမူးစေလို့ပါပဲ။ နောက်တခုကတော့ ဖိနပ်အပါးစီးသွားတာမမှားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိုင်စရာမရရင်ညနေစောင်းထိမတ်တပ်ရပ်ရလို့ ပါပဲ။ မနေ့ကကျွန်မဖိနပ်အမြင့်စီးသွားမိတာ ထိုင်ငိုချင်စိတ်ပေါက်အောင် အဲဒီဖိနပ်ချွတ်ပြီးလွှင့်ပစ်ချင်လောက်အောင် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ မိုးလင်းတာနဲ့ မနက်စာကိုထမင်းအ၀စားသွားသင့်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင်နေ့လည်စာကိုညနေစောင်းမှစားရနိုင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ မနက်ကို ၉ နာရီ လောက်ရောက်အောင်သွားသင့်ပါတယ်။ ကားယူသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ရပ်စရာအတော်ခက်ပါတယ်။ ရုံးထဲကို စက်မှု့ ( ၁ ) လမ်း ဘက်အပေါက်ကနေ အဝေးကြီးလမ်းလျှောက်ဝင်ရပါတယ်။ လုံခြုံရေးကတော့ အရင်လိုမတင်းကြပ်တော့ပါဘူး။ တာဝန်ကျေပါပဲ။ မည်သူမဆိုမှတ်ပုံတင်ပြရင်ဝင်လို့ရပါ တယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ဘယ်ဘက်ကခန်းထဲဝင်ပြီး ဖောင်ဝယ်တဲ့ကောင်တာမှာ ၃၂၀၀ ကျပ်ပေးပြီး ဖောင်ဝယ် ဘောင်ချာဖြတ်ပါ။ ပြီးရင် ဓါတ်ပုံတမ်းရိုက်ပါ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ရင် မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းက ဘဏ်မှာ ဖောင်ယူ ( အလကား ) ဖြည့်ပြီး ငွေ ၂၀၀၀၀ တိတိသွင်းပါ။ ချလံစောင့်နေတုန်း ဖောင်ဖြည့်ပါ။ အဲဒါဆိုမြန်ပါမယ်။ ကျွန်မတုန်းက မသိတော့ နောက်မှငွေသွင်းတော့ အချိန်တွေမလိုပဲကုန်ပါတယ်။ ( နောက်ငွေသွင်းခန်းမှာတခါတည်းမေးပါ။ ဥပမာ စာအုပ်မှာနာမည်ပြင်၊ နာမည်ပြောင်း၊ နာမည်တိုး နဲ့တခြား ပထမစာအုပ်နဲ့မတူတဲ့အချက်တွေပါရင် ဘယ်လောက်ဒဏ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတခါတည်းမေးပြီး ဒဏ်ကြေးသွင်းပါ။ မဟုတ်လို့ကတော့ စလစ်ခန်းရောက်ပြီး ကိုယ့်ဖောင်စစ်မှ လိုနေတယ်ဆိုရင် ဘဏ်ကိုနောက်တခေါက်သွား၊ ငွေသွင်း၊ စလစ်ခန်းပြန်သွား၊ ပြန်ပေးနဲ့အချိန်ကုန်ပါတယ်။ ကံမကောင်းရင် အလှည့်ကျော်တယ်ဆိုပီးရန်လုပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတုန်းက သားနာမည်တိုးတာမသိလို့ အခုလိုပဲ နောက်မှဒဏ်ကြေး ၄၁၀၀၀ ကျပ်ပေးဆောင်ပြီးပြန်ရောက်တော့ ဆောင်ပြီးကြောင်းပြတာကို နောက်မှရောက်ပြီးကျော် ချတယ်ဆိုပြီး ခုနှစ်ဆယ်ကျော်အဘိုး တစ်ယောက်က လူပုံလည်မှာအရမ်းကိုရန်တွေ့ခံလိုက်ရပါတယ်။ အတော်ရှင်းယူလိုက်ရပါတယ်။ )
ချလံရပြီးရင် ဓါတ်ပုံသွားရွေး ပြီး ဖောင်မှာကပ်ပါ။ စာအုပ်အသစ်သမားဆိုရင် အဲအခန်းမှာပဲ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမိတ္တူ ( ၃ ) စုံ နှင့် မူရင်း၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( ၃ ) စုံ နှင့် မူရင်း တို့နဲ့ လ၀ကစစ်ခံရပါမယ်။ သက်တမ်းတိုးဆိုမလိုပါဘူး။ ကျွန်မတုန်းက အဲဒီက၀န်ထမ်းက တန်းစီ ဆိုလို့စီလိုက်မိတာ အချိန်အလကားပုပ်ကုန်ပါတယ်။ နောက်အတွင်း ဖက် အ၀ိုင်းပါတ်ဝင်သွားပြီး ညာဖက်အခန်းမှာ ဖောင်စီရပါတယ်။ ၁၀၀၀ ကျပ်ပေးရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ( ၂ ) စုံ၊ passport စာအုပ်အဟောင်းမိတ္တူ ( ၂ ) စုံ နှင့် မူရင်း၊ ဘဏ်ချလံ၊ ဓါတ်ပုံဘောင်ချာနဲ့ ကိုယ်ဖြည့်ထားတဲ့ဖောင်၊ နောက်ထပ် ဓါတ်ပုံတပုံပေးရပါတယ်။ တန်းစီရပါတယ်။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လို့ဖောင်စီမယ်ဆိုတုန်း လာပါပြီ ကျွန်မဦးလေးက အသက် ၉၁ မို့ မထိုင်နိုင်လို့အမြန်ပြန်ချင်လို့ အရင်ဖောင်စီပရစေဆိုပီး အတန်းကျော် တက်လာပါတယ်။ ကိုယ်ကလဲအော်သက်ကြီးရွယ်အိုပဲ ကဲကဲစီပေးလိုက်ပါဆိုတော့ အောင်မယ်လေး ဆွေတော်ရှစ်သောင်းမျိုးတော်ပေါင်းဖောင်တွေတန်းစီထုပ်လာပါတယ်။ တူ၊ တူမ၊ ညီမ အစုံပဲ။ ငါးယောက်လောက်ရှိတယ်။ တကယ်ဆို Home Service ခေါ်ရမဲ့အရွယ်ကို သူတို့ပါရောရောင်ပြီး အမြန်ထွက်ချင်တာနဲ့ ဒီသက်ကြီးရွယ်အိုကို ဒုက္ခပေးပြီးခေါ်လာတယ်။ ရွာသူားများ အဲလိုကြုံရင် အားနာရန်မလို။ ငြင်းလိုက်ပါ။ အကြာကြီးပဲစောင့်လိုက်ရပါတယ်။ လူများတော့ စာအုပ်တွေမှားထည့်၊ ပြန်ထုပ်၊ ပြန်စီနဲ့ အတော်ကြာပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကလေးပါရင်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုပါရင် VIP ခန်းသွားရပါတယ်။ သာမန်သက်လတ်တွေကတော့ ရိုးရိုးခန်းမှာသွားရပါတယ်။ သိပ်တော့ဘာ မှမထူးပါဘူး။ စောင့်ရတာပါပဲ။ အဲအခန်းရောက် ရင် ဖောင်ထပ်ရပါတယ်။ အောက်ကနေထပ်ရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ အလှည့်ကျကင်းစောင့်ရပါတယ်။ နောက်မှရောက်တဲ့သူက အပေါ်ကထပ်သွားမဆိုးလို့ တယောက်တလှည့် ကင်းစောင့်ရပါတယ်။ အပုံပြိုမစိုးလို့ မကြာမကြာအပုံကိုညီအောင်စီပေးရပါတယ်။ ထိုင်စရာလုံးဝမရှိသလောက်ပါပဲ။ မနက်ရောက်ကတဲက ပြေးလိုက်လွှားလိုက် မတ်တပ်တန်းစီလိုက် မတ်တပ်ရပ်စောင့်လိုက်နဲ့။ လှောင်ပိတ်နေတဲ့အခန်းထဲမှ မွန်းကြပ်အီနောက်လာပါတယ်။ ကိုယ့်အပုံကိုကင်းစောင့်နေတုန်း ကိုယ့်ဖောင်လဲရောက်ခါနီးရော ဗြုန်းဆိုထမင်းစားနားမယ်ဆိုအဲမှာသေရောပဲ။ အဲဒီ VIP ခန်းမှာပိုဆိုးတာက သာမှတ်ပုံတင်တွေပါ။ ဘုန်းကြီးနဲ့သီလရှင်တွေလာရင် အောင်မယ်လေး ကိုယ့်အပုံ ကိုလက်ဖျားနဲ့ထိဖို့မပြောနဲ့ မျက်စောင်းလေးတောင်မှမထိုးတော့ပါဘူး။ အဲဒီအထပ်လိုက်ကိုမပြီးမချင်းတခြားဘယ်ဖောင်မှမကိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီမှာစောင့်ပေတော့ပဲ။ ရိုးရိုးခန်းကတော့ အဲပြသနာကင်းလောက်တယ်။ ကိုယ့်ဖောင်ကိုင်ပြီဆိုရင် မှတ်ပုံတင်ပြ အစစ်ခံရပါတယ်။ ပြီးရင်ခဏစောင့် ကွန်ပြူတာစာရေးကခေါ်မှ လက်ဗွေနှိပ် လက်မှတ်ထိုး၊ ခဏနေစလစ်ထွက်လာရင် စလစ်ကိုစစ်၊ အဲဒီမှာမှားရင် တခါတိုင်ပါတ်ပြန်ရော။ စလစ်ပြန်ထုပ်၊ အစောကသူပုံလိုက်တဲ့ဖောင်အပုံထဲကနေ ကိုယ့်ဖောင်ကိုဖြဲရဲ ရှာ၊ အဲနားကရဲတွေပါဝိုင်းရှာရတယ်။ ကိုယ်လဲကောင်တာအပြင်ကနေ မျက်စိနဲ့ရှာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ဟုတ်ရင်တခါသေချာအောင်ပြန်တိုက်။ မှန်ပြီဆိုမှ သက်ပြင်းချ ပြန်ထွက်လာရတာပေါ့။ အောင်နိုင်သူလိုတော့ ရင်ကော့ခေါင်းမော့မထွက်နိုင်ပါဘူး။ ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ မူးနောက်အီဝေနေလို့ လေးဘက်ထောက်မတတ်ပြန်ထွက်၊ :chee: ထမင်းဆိုင်ကိုမာရသွန်နှုန်းနဲ့ပြေး ရေအရင်သောက်ပြီးထမင်းစားပြီးမှပဲ :sar: ဟင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးဆိုပြီးရော။
နောက်ဆယ်ရက်မှာတော့ စာအုပ်ထုပ်တခါတွေ့ရအုံးမယ်ပေါ့ ဒီလူတွေနဲ့။ :byee:
အီးအီးပါလို့ ရဒယ်ပေါ့နော် …
ရ၀ူးအေ့ ကိုယ့်ဖောင်ကို ကင်းစောင့်နေရတာ ဘယ်မှသွားရဲဘူး။ နောက်ခေါ်တာလဲ အသံလေးက မနှဲလေးသံနဲ့မို့ ကောင်တာနားကပ်နားစွင့်နေရတာ။ မကြားရဘူး။ အဲဒါကောင်တာနားကလူတွေက ဘယ်သူ ဘယ်ဝါဆိုတဆင့်အော်ပေးရတာ ဆိုးချက်
အဲဒါကြောင့် Yoona က ဘယ်လောက်ခေါ်ခေါ်
အနော် ကိုးရီးယား မသွားတာ ၊
လက်တွေ့တော့ မှတ်ပုံတင် မရှိပဲ နေနေတာ ၃ နှစ်ကျော်ပြီ ၊
ဒီ သောက်ရုံးတွေနဲ့ မပတ်သက်ချင်လို့ ၊
ခရီးသွားရင် ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာနဲ့ပဲ ဒိုးတယ် ၊ ဒါဗျဲ
အောင်မယ်လေး ကိုမျိုးသန့်ရေ အသစ်ပြန်လုပ်ရရင် ပိုဆိုးလို့ အဟောင်းလေးကိုပဲ ဒုတ်ခခံသက်တမ်း တိုး နေရတာ။
နာ့ ယောက်ခမွလေး တနားပါဒယ်။
ချွေးမယေး ဆီ လာမို့လားးးးး
မက်မှန်လေးရော ပါမှာ ယားဟင်?
အခုတော့ သက်တမ်းတိုးရုံပါချွေးမွလေးရေ။ ဒီအောက်တိုဘာတုန်းက ချွေးမွလေးဆီညက်မှန်လေးခေါ်လာမို့ ဟာကို အိမ်ဦးနတ်ကအလုပ်ပြောင်းတွားလို့ တနှစ်လောက်တော့ခြေချုပ်မိတွားဘီထင့်။
Down Load ဆွဲထားလိုက်ပါပြီ။
ရှေ့ နှစ်ဆန်းဆို သက်တမ်းတိုးရတော့မှာမို့…….
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးရေ။ ကျွန်မလဲဒီလိုအသေးစိတ်မသိလို့မနေ့ အချိန်တွေအလကားပိုကုန်ခဲ့တာပါ
စာအုပ်တွေမှာ ခရီးသွားကိုယ်တွေ့အကြောင်းတွေကို တောလား ဆိုပြီးရေးဖွဲ့ကြတယ်။ အလောင်းတောကဿဖ တောလား တို့၊ ပုံတောင်ပုံညာ တောလား အဲလိုပါ့ဗျာ။
အခု ကိုယ်တွေ့ Passport ရုံးတစ်နေတာအကြောင်းကြတော့ ကာရံညီခေါ်ရရင် Passportရုံး မောလား ပေါ့နော်။
ဟုတ်ပါ့ကိုခင်ခရေ။ မလိုအပ်ပဲလဲအချိန်တွေပိုကုန်လို့ ပိုမောခဲ့ပါတယ်။
TNA ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောပါရစေ..မနေ့က ဖေ့ဘုတ်မှာ သက်ပြင်းချနေသံကြားလို့
ကျနော်က ရွာ..အဲ.အဲ..ဒီမြို့ထဲမှာရေးတင်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်သေးတယ်..အခုတကယ်ရေးတင်လိုက်တော့
အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့နော….ကျနော်လည်း နောက်အပါတ် သက်တမ်းသွားတိုးမလို့..အဲဒါ..
အလုပ်နဲနဲများသွားတာနဲ့ နေ့ရွေ့ညရွေ့နဲ့ သက်တမ်းတောင်ကျော်သွားပြီ…၂၀၁၃အောက်တိုဘာ၂၈နေ့
ဟုတ်ကဲ့ဦးမိုက်ရေ ပထမတော့ အကျဉ်းပဲ FB မှာတင်မလို့။ ဦးမိုက်မန့်ထားတာတွေ့တာနဲ့ရေးစရာလေးတွေ လဲများတာနဲ့မြို့ထဲတင်လိုက်တာ။ တိုးလို့ရပါတယ်။ ကျွန်မလဲ ၁၅ ရက်လောက်သက်တန်းကျော်နေတာပဲ။ ဘာမှတော့ပြောဘူး။ သားနာမည်တိုးတာပဲ ဒဏ်ကြေးဆောင်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကလဲသက်သက်မဲ့ကြီးပါ။ အိမ်ထောင်စုဇယားမှာရော မှတ်ပုံတင်မှာရော သတင်းစာမှာပါတရားဝင်အကုန်လုပ်ထားတာ ကို လေးသောင်းတစ်ထောင်တောင်ထပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ တရားမ၀င်လုပ်ထားတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ပါ့စ်ပို့သွားလျှောက်ရင်.. သာမန်အားဖြင့်၁နာရီလောက်ကြာပါတယ်..။
စာပို့တိုက်တွေမှာ..ပါ့စ်ပို့ လျှောက်လို့ရပြီး.. တန်းစီစောင့်ရင်..ရှေ့မှာလူ၂ယောက်လောက်ရှိနေတတ်တာပါ..။
မှတ်မိသလောက်တော့.. အမေရိကန်ဖြစ်ကြောင်း.. ဆာတီဖိကိတ်ဒါမှမဟုတ်..မွေးစာရင်းရယ်..။ အိုင်ဒီ(ကားလိုင်စင်)ရယ်ယူသွားရပါမယ်..။ ဖေါင်ကို.. ရှေ့မှာတင်တခါတည်းဖြည့်…။ တန်းစီနေသူရှိရင်စောင့်…။ အထဲဝင်.. ငွေသွင်း.. ပြန်လာယုံပါ..။
စုစုပေါင်း.. နာရီဝက်ကနေ ၁နာရီလောက်ကြာတတ်ပြီး..နောက် ၁လလောက်ကြာရင်.. စာတိုက်ကနေ ပါစ့်ပို့ကို အိမ်အရောက်ပို့ပါတယ်..။
မြန်မြန်လိုချင်ရင်.. အမြန်ကြေးသွင်းရင်.. ၁ပါတ်လောက်ဆိုရပါတယ်..။
ဒါ့ပုံလည်း..(ရိုက်မလာရင်) စာတိုက်မှာတင်… တခါတည်းရိုက်ပေးပါတယ်..။
အင်းဒီမှာတော့ သဂျီးရေ အဲမြို့ဝန်မင်း အဲ မြို့စားမင်းရေ အပေါ်ကရေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ နေ့ချင်းပြီးဆို တာဒါအတော်မြန်လာတာနော်။ အရင်ကဆို ရပ်ကွက်ရုံးကို ၁ ရက်၊ ၁၇ ရုံးကိုတရက်၊ Passport ရုံးကို ဖောင်ယူဓါတ်ပုံရိုက်ဖောင်တင်တရက်၊ နောက်နေ့မနက်တုန်ကင်ယူတရက် နောက်နေ့စလစ်ထုပ် တရက်၊ နောက် ၁၉ ရုံးတရက် အဲလိုအဆင့်တွေအများကြီး။ အခုက တရက်ထဲဆိုတော့တိုးတက်လာ တယ်ပြောရ မလားပဲ သဂျီးရေ အဲမြို့ဝန်မင်း အဲ မြို့စားမင်းရေ
သများလည်း သက်တမ်း သွားတိုးရမှာ မွသဲရေ …ဒါပေသိ .. အိုက်လို လူနံ့ တောထဲ အကြာကြီး တိုးဖို့ တွေးရင်းတွေးရင်း ကြောက်နေတာကြောင့် … အခုထိ မတိုးဖြစ်သေးဘူး … ။
အရေးတကြီး ထွက်ဖို့မလိုတော့လည်း … ဒီတိုင်းပစ်ထားထားတာ … ။
တိုးထားလိုက်တုန်ကလေးရေ။ မတော်ရက်အရမ်းလွန်လို့ ဒဏ်ကြေးတွေအများကြီးပေးနေရအုံးမယ်။ အသစ်လုပ်ရင် လ၀ကစစ်တဲ့သူကအရမ်းအပေါက်ဆိုးသနော့။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ဆိုတာ
သိပ်လိုအပ်တဲ့ တင်ပြချက် ပါ
အေးပါအေ ငါ့မှာဒီလိုအသေးစိတ်မသိလေတော့ အချိန်တွေပုပ်ကုန်တယ်အေ့။ အဲဒါကြောင့်နောက်လုပ်မည့် သူများ အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နေ့တပိုင်းနဲ့ပြီးတော့ လူသက်သာတာပေါ့။
ပတ်စ်ပို့သက်တန်းတိုးလုပ်ရအူးမှာ အသဲလေးစာဖတ်ရတာနဲ့ အတော်ပဲ
ဒီအတိုင်းသာလုပ် Wow ရေ မြန်တယ် နေ့တပိုင်းနဲ့ပြီးလောက်တယ်။ အမမှာသာ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့မို့ ညနေစောင်းသွားတာ
နိုင်ငံဂျားဂို အောက်လမ်းကထွက် ပီးဒဲ့ဟာကို… ရှည်ကိုရှည်ဒယ်….။
ဟမ်… အောက်လမ်းကထွက်ရင် မတော် ဘန်ကောက်မှာလုပ်စားနေရမှာပေါ့ ဒယ်ဒီကြောင်ရဲ့… ပေါရက်လိုက်တာ
အောင်မယ်လေး အူးကြောင် ယိုးဒယားမှာ ဒီအသက်နဲ့ဘာမှလုပ်ရတော့ဝူး
ကဲ ကွကိုသွားလုပ်လိုက်တာ ပီးခဲ့ပီဆိုဘာဒေါ့
ဘာမှလုပ်ဘူး ဘာမှလုပ်ဘူး ချွေးမွလေးပြောဒဲ့ဘရင်းဒွေဝယ်ပစ်မွှာ
ဘာစာရွက်မှဖြည့်စရာမလိုဘူး… ဒီနေ့လုပ်… မနက်ဖြန်ရတယ်…
အောင်မယ်လေး ဖက်ဖက်ကက်ရယ် နှစ်သောင်းခွဲပဲအကုန်ခံပီး ကျန်တဲ့ တသိန်းနှစ်သောင်းခွဲကို ဘရင်းဒွေဝယ်ပစ်မယ်
ဟိုးအနောက်ဆောင်ထဲကို ဝင်သွားတော့လေ.. အဲ့က မမတွေက လာလာ..ညီမလေး ဆိုပြီး ပါလာတဲ့စာရွက်တွေကို စစ်ပေး၊ ပြီးရင် ဓာတ်ပုံကို ကော်နဲ့ကပ်ပေး၊ သေချာလေးပြန်စီပေး လုပ်ပေး၊ ပြီးရင် တစ်ထောင်လို့ ပြုံးပြုံးလေးပြောပြီး ပေးလိုက်တဲ့ငွေကို သူတို့အိတ်ထဲထည့်လိုက်တာ..အဲ့ မမတွေရော ရှိသေးလားဟင်င်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အနော်တုန်းကတော့ ပိုက်ပိုက်လေး 3000 လောက်ထပ်ကုန်လိုက်တာ အကုန်အဆင်ပြေတယ်… နောက်ပြီး အမြန်လိုချင်လို့ DG ကို ဝင်တွေ့တော့လည်း ဘာမှ မပေးရဘူး.. သွားထုတ်တော့လည်း ဘာမှမပေးရဘူး…
အခုကတော့ ကိုကိုဒွေဘာဂွယ်။ တထောင်ကတော့ ဒမယ်အမိအလိုက်သိဒဲ့ ငှဲငှဲငှဲ။
စနေ ရော ရုံးဖွင့်လား ခင်ဗျ